လူငယ်မော်လီကျူး NAD + - လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသော coenzyme-Shangke Chemical
Youth Molecule NAD + - လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ Pl မှပါဝင်သော Coenzyme
အစဉ်အဆက်၏ကြား၏ နီကိုတီနိုက် Adenine Dinucleotide (NAD +) သို့မဟုတ်“ လူငယ်စမ်းရေတွင်း” လော \_ t သင့်တော်သောအာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ပုံမှန်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ရောဂါတစ်မျိုး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအသက်အရွယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကိုသိသိသာသာချို့တဲ့မှုအမျိုးမျိုးနဲ့စတင်တွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်။ နိမ့်နီကိုတင်းနိုက် adenine dinucleotide (NAD +) အဆင့်များသည်ဤအားနည်းချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ NAD + ဖြည့်စွက် အထူးသဖြင့်ကျန်းမာသောအိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ချို့တဲ့သောကွာဟချက်ကိုပိတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) သည် adenine နှစ်ခုလုံးပါဝင်သော coenzyme ကိုရည်ညွှန်းသည်။ နှင့် nikotinamide။ သက်ရှိဆဲလ်တိုင်းတွင်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်နီကိုတင်းနိုက်ဒိုင်ရိုင်ဘိုဇိုက်ဒ်မှဆင်းသက်လာသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ NAD အဆင့်များသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အိုမင်းမှုနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
NAD အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ nikotinamide adenine dinucleotide (NAD +) နှင့် nikotinamide adenine dinucleotide (NAD) + ဟိုက်ဒရိုဂျင် (H) (NADH) ။ ယခင်တွင်နောက်ထပ်အီလက်ထရွန်နှစ်လုံးရှိသည်။
NAD + ဆိုတာဘာလဲ။
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) သည် pyridine nucleotide ဖြစ်ပြီးသက်ရှိဆဲလ်တိုင်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်း pyridine nucleotide သည်အဓိကသော့ချက်အဖြစ်သာမကအလွှာတစ်ခုကဲ့သို့သောဇီဝဖြစ်စဉ်များစွာကိုကူညီသည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု, ကျန်းမာ DNA ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်, immunoregulation နှင့်ဗီဇထုတ်ဖော်ပါဝင်သည်။ ဒါက NAD + အိုမင်းခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာပြောင်းပြန်ပါဝါကိုရှင်းပြသည်။
NAD + သည်ဒုတိယ messenger အချက်ပြခြင်းနှင့် immunoregulatory လုပ်ဆောင်မှုများတွင်အဓိကကျသည်။
လူငယ်မော်လီကျူးအနေနဲ့၊ NAD + အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကအချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + အဆင့်သည်လူတစ် ဦး ၏နုပျိုမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထောက်ခံသည်။ NAD + အဆင့်များလေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များ၊ တစ်သျှူးများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏အလားအလာများလေလေဖြစ်သည်။ ဒါက NAD + အိုမင်းခြင်းပြောင်းပြန်လူကြိုက်များ၏အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသော။
အခြားတစ်ဖက်တွင် NAD + ချို့တဲ့ခြင်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးအတွက်လုံလောက်သော NAD + အဆင့်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
NAD + ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ကျန်းမာသောအင်ဇိုင်းနှင့်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များကိုမအောင်မြင်နိုင်ပါက၎င်းသည်သွက်လက်မှုလျှော့ချခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှုန်းလျှော့ချခြင်းစသည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြသနာများကိုစတင်ပေါ်ပေါက်စေသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်တွေရဲ့ပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထောက်ပံ့ရန် NAD + နှင့် NADH အဆင့်မလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်သော့ NAD + function ကို အီလက်ထရွန်များအားမော်လီကျူးတစ်ခုမှတစ်ခုသို့အခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအားဖြင့် Redox တုံ့ပြန်မှုဟုခေါ်သောလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ Redox တုံ့ပြန်မှုများမှတဆင့်အာဟာရများသည်အားနည်းသောအောက်စီဂျင်နှောင်ကြိုးတွင်သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုလွှတ်ပေးနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်၎င်းတို့အားစွမ်းအင်စီးဆင်းရန်အတွက်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို fatty acids နှင့် glucose အဖြစ်သိမ်းဆည်းသည်။ ထို့ကြောင့် NAD + အင်ဇိုင်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ the သည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုသွေးစီးမှသက်ဆိုင်ရာဆဲလ်များသို့သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
ဖက်တီးအက်စစ်နှင့်ဂလူးကို့စများသည်စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်သောအခါ၊ NAD + အင်ဇိုင်းသည်စွမ်းအင်ကိုဆယ်လူလာစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် mitochondria သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည်။ သို့မဟုတ်ပါက NAD + ချို့တဲ့ပါကဆဲလ်အတွင်းရှိစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုပြတ်တောက်သွားပြီး၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသော mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
NADH တိုင်းအတွက် NAD + သည် ATP မော်လီကျူးသုံးခုထုတ်နိုင်သည်။ ဆဲလ်များ၏စွမ်းအင်ရရှိမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည် NAD + သည်သင်၏အိုမင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဇီဝဖြစ်စဉ်များကိုဓါတ်တိုးခြင်းမှတစ်ဆင့်တိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်သင်စိတ်ပိုင်းနှင့်ကာယပိုင်းနှစ်ခုလုံးပိုမိုအားကောင်းလာသည်။
အထူးသဖြင့်အဓိက NAD + လုပ်ဆောင်ချက်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ redox တုံ့ပြန်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ ဒီအင်ဇိုင်းတွေအားလုံးကို oxidoreductases လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းတို့တွင် Sirtuin အင်ဇိုင်းများ (SIRT)၊ Poly-ADP-ribose polymerases နှင့် cyclic ADP ribose hydrolase (CD38) တို့ပါဝင်သည်။
Sirtuin ကိုစတင်အသက်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Sirtuin အင်ဇိုင်းများ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာအိုမင်းခြင်းကိုလွယ်ကူစေသောဗီဇများကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးဗီဇများ၌အဆီပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်သွေးသကြားဓာတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါ ၀ င်သူများပါဝင်သည်။ sirtuin enzymes တွေရဖို့အတွက် NAD + enzymes တွေလိုအပ်တယ်။ ဒီ NAD မော်လီကျူးတွေကပြုပြင်တည့်မတ်ဖို့ပရိုတိန်းကနေထုတ်ယူတဲ့ acetyl အုပ်စုတွေကိုထုတ်ယူဖို့ကူညီပေးတယ်။
ထို့ကြောင့် NAD + အဆင့်တိုးလာခြင်းသည်တက်ကြွသော Sirtuins အရေအတွက်များပြားစေသည်။ ဤသည်တိုးမြှင့် mitochondrial အသက်ရှူအဖြစ်တိုးမြှင့်အင်ဆူလင် sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတိုးတက်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ NAD + အိုမင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်စွမ်းအားကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ဦး နှောက်၏အသက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်တိုးတက်လာသောအင်ဆူလင် sensitivity သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်သွေးသကြားဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များသည်ငယ်ရွယ်ပြီးပိုမိုနုပျိုသောပုံစံဖြင့်ပြုမူကာယေဘုယျအားဖြင့်လူငယ့်အသွင်အပြင်ကိုလည်းပေးသည်။
ထို့အပြင် NAD + သည်ဆဲလ်မှဆဲလ်ဆက်သွယ်မှု၏အခြေခံဖြစ်သော extracellular အချက်ပြမှုအတွက်သိသိသာသာတာ ၀ န်ရှိသောမော်လီကျူးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အာရုံကြောမှသတင်းအချက်အလက်များကိုကြွက်သားကိုယ် ၀ န်ဆောင်များ၏ဆဲလ်များသို့ချောမွေ့စေသည့် neurotransmitter အသစ်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
NAD + ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
များစွာရှိပါသည် NAD + အကျိုးခံစားခွင့်များ ပါဝင်သည့် function များနှင့်
အသက် -related ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာအခြေအနေများမှ 1. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
NAD + အိုမင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သောလူများသည်သူတို့၏ NAD + အဆင့်များကိုအမြဲတမ်းကျန်းမာစေလိုသည့်အဓိကအကြောင်းများဖြစ်သည်။ လူတွေအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ DNA DNA ပျက်စီးမှုကတိုးလာပြီး NAD + အဆင့်ကိုလျှော့ချပေးတယ်၊ SIRT1 ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကျဆင်းလာပြီး mitochondrial function ကိုလျော့နည်းစေတယ်။ ၎င်းသည်ဆယ်လူလာ oxidative stress ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်လူ၏ဘာသာစကားတွင်ခန္ဓာကိုယ်၏ antioxidants နှင့် free radicals များသည်ဟန်ချက်မညီသောဆိုလိုသည်။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့်အိုမင်းရင့်ကျက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများတွင်သွေးကြောကျဆင်းခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာ၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်၊
ကံကောင်းထောက်မစွာ, NAD + သည်ကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များကိုအောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်ကိုသုတေသနများစွာကပြသသည်။ ထို့ကြောင့် NAD + အစားအစာများ၊ ဖြည့်စွက်ဆေးများသို့မဟုတ်အခြား NAD + အဆင့်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အထူးသဖြင့်အသက် ၅၀ ကျော်သောသူများသည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သူတို့နေထိုင်မှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အပိုဆောင်း NAD + သည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေပြီး mitochondria ၏ကြီးထွားမှုကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်များအတွင်းလုံလောက်သော ATP အဆင့်များကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း NAD + သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ mitochondria ၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏ mitochondria သည်စွမ်းအင်လုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်သောအခါနှလုံး၊ ဦး နှောက်၊ ကြွက်သားနှင့်အဆုတ်စသည့်အရေးကြီးသောအင်္ဂါများကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၌ NAD + အဆင့်လုံလောက်သောအခါ၊ ဤကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသည်ကျန်းမာသောအဆင့်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်စွမ်းအင်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ရှင်သန်မှုနှင့်ပိုမိုရှင်းလင်းသောစိတ်ခံစားချက်များကိုခံစားရသည်။ adenosine trifosfate ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်သက်ရှိဆဲလ်တိုင်းသည်ဤ coenzyme လိုအပ်သည်။
ဆဲလ်များသည်သင်၏ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများလိုချင်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် adenosine triphosphate ကိုအသုံးပြုသည်။ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအားဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ဆဲလ်တွေဟာယေဘုယျအားဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခံစားချက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကသင်၏သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုနှေးကွေးစေသည်။ မင်းရဲ့စိတ်ကမြူဆိုင်းနေတယ်၊ သို့သော် NAD + သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုသက်သာစေသည်ကိုငါတို့တွေ့ပြီဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် coenzyme သည်သင့် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အစပျိုးပေးခြင်းဖြင့်သင့် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်၏စိတ်သည်ပိုမိုနိုးကြားလာပြီးသင်၏စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အလုပ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံ့လရှိသူဖြစ်သည်။
NAD + ၏ဆယ်လူလာ oxidative stress အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုထူထောင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့သည် NAD + ကုသမှု ဓာတ်ခွဲခန်းဆဲလ်များကိုပိုမိုစိတ်ဖိစီးမှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် NAD + နှင့်မပါသောဆဲလ်များသည် oxidative stress ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤ coenzyme သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အားရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိများကိုပိုမိုထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်ရန်ကူညီပေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။
သက်တမ်းပိုရှည်ရန် 5.DNA ပြုပြင်ခြင်း
သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်သင်သည်သင်၏ DNA ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ပျက်စီးသွားသောဒီအင်အေသည်သင်၏သက်တမ်းကိုတိုစေသည်။ သို့သော်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် NAD + လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ထားခြင်းဖြင့်ဤ coenzymes များသည်အီလက်ထရွန်များအားပျက်စီးသွားသော DNA နှင့်areasရိယာများသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပျက်စီးပြုပြင်မှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ NAD + ၏သက်တမ်းသည်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့သည်ဟုနိဂုံးချုပ်ထားသည့်လေ့လာမှုများစွာအရသိရသည်။
သုတေသီများက NAD + သည်လူတစ် ဦး ၏အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်ပုံမှန်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်နိုးထခြင်းနှင့်သင့်ပုံမှန်နေ့၏အထွေထွေစီးဆင်းမှုသည်သင်၏နှလုံးစည်းချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုသည်ဓာတုဒြပ်ပေါင်း၏လွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိသည်။
sirtuins နှင့်အကြားသင့်လျော်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု NAD + ရလဒ်များ တစ် heathy နှလုံးစည်းချက်နှင့်အစာစားချင်စိတ်၌တည်၏။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် NAD + သို့မဟုတ် sirtuins ၏ပြတ်တောက်မှုကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ circadian rhythm ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ထို့ကြောင့် NAD + သည်ကျန်းမာစွာအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါကကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် NAD + သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သည်နှင့်ကျန်းမာသောလူနေမှုဘ ၀ ကိုကူညီရာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
NAD + ၏လျှောက်လွှာ / အသုံးပြုမှု
ရလဒ်အနေနှင့်လူတစ် ဦး သည်ပိုမိုထိရောက်စွာမှတ်မိနိုင်ပြီးမှတ်မိနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏အလှအပကိုအများအားဖြင့်လက်သည်းများနှင့်ဆံပင်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပျက်စီးသွားသောဒီအင်အေ၏ပြုပြင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်စွမ်းရည်ရှိသောကြောင့် NAD + သည်ထူသောလက်သည်းများနှင့်ဆံပင်အတွက်အရေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပါးလွှာသောဆံပင်နှင့် / သို့မဟုတ်လက်သည်းများနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများရှိသူများအတွက်ရှာဖွေမှုများစွာပြုလုပ်ထားသောဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူတို့တွင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှအရေပြားချွတ်ယွင်းမှုများ၊ အရေးအကြောင်းများ၊ လိုင်းများနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောအသားအရေစသည်တို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုငြင်းဆန်လိုသူများသည် NAD + ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးကြသည်။ The NAD + ဆန့်ကျင်အိုမင်း အကျိုးကျေးဇူးကအရမ်းရေပန်းစားသည်။
4.Muscle function ကိုတိုးတက်မှု
လူတွေအိုမင်းလာတဲ့အခါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကြွက်သားကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေကြောင့်သူတို့ဟာတိုလာပြီးအားနည်းလာတယ်။ သို့သော် NAD + ၏အိုမင်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူများသည်သူတို့၏ကြွက်သားများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် NAD + အနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ပြင်ပအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေကြသည်။ အင်ဇိုင်းများဖြည့်တင်းပေးခြင်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါအမျိုးမျိုးကိုပိုမိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိစေသည်။
NAD + သောက်သုံးသော
NAD + သည်သဘာဝဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအတန်အသင့်အသုံးပြုသင့်သည်။ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ (FDA) ၏အဆိုအရအလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည် NAD + သောက်သုံးသော တစ်နေ့လျှင်ဂရမ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ဆေးမှတ်တမ်းပေါ် မူတည်၍ ၇ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိကုသရန်အကြံပြုထားပါသည်။
NAD + အဆင့်များကျဆင်းခြင်း၏အကျိုးဆက်များ
လူတိုင်း၌ NAD + အဆင့်အလုံအလောက်ရှိစေရန်အရေးကြီးသည်။ တိုးလာ
NAD + ချို့တဲ့သောသူများအတွက် NAD + level လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NAD + ချို့တဲ့ခြင်းတွင်မလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များရှိသည်။
လူငယ်တစ် ဦး တွင် NAD + နှင့် NADH သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုများပြားသည်။ အသက်အရွယ်နှင့်အတူ NAD + အဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းသည် SIRT1 လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးအိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာစေသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ထိုလက္ခဏာများကိုပယ်ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ coenzyme မြှင့်တင်မှုဖြင့် SIRT1 လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊
Hypoxia သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအောက်စီဂျင်ပမာဏနည်းသောသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်မြဲမြံသည့်ချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုတွေ့ရသည်။
hypoxia ခံစားနေရသူများသည်သူတို့၏ NAD + အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများမှသက်သာရာရနိုင်သည်။ အခြေအနေမြင့်မားသောသူတို့သည် NAD + အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဖြစ်ပေါ်လွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
နေရောင်ထိတွေ့မှုကြောင့်နေလောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေပြားပျက်စီးခြင်းကိုကြောက်ပါသလား။ NAD + နှင့် နတေစျဆငျ့ သင်ဖုံးလွှမ်းတယ် နှစ် ဦး စလုံးသည် UVB နှင့် UVA ရောင်စဉ်များကိုစုပ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင့်အရေပြားအားနေရောင်မှကာကွယ်ပေးပြီးအရေပြားကင်ဆာကိုပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အားနည်းချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါကသင်သည် NAD + အဆင့်နိမ့်ကျပြီး SIRT1 လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် NADH သို့မဟုတ် NAD + ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် mitochondria function ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။
5. ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ
Sirtuins ၏ activation မှတဆင့် NAD + သည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုသြဇာသက်ရောက်သောမျိုးရိုးဗီဇကိုသွယ်ဝိုက်။ တိုးတက်စေသည်။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းခြင်းဆိုင်ရာပြwithနာများရှိသူများသည် NAD + မှတဆင့်မိမိတို့လိုချင်သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု - အပေးအယူအခြေအနေ၏ရလဒ်အဖြစ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသောကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ် LDL ကိုလက်စထရောမြင့်မည်ကိုကြောက်လျှင်သင်အဘို့ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + လုပ်ဆောင်မှုသည် mitochondria ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ၎င်းသည်နှလုံး၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်အရေးပါသည်။ ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ချို့တဲ့မှုသည်နှလုံးရောဂါကိုမြန်စေပြီးမည်သူမျှမခံစားချင်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင့်တွင် ischemia-reperfusion ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အခြားနှလုံးရောဂါကြောင့် Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) အဆင့်နိမ့်လျှင်သင်ပိုမိုသက်သာလာပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း coenzyme ထောက်ပံ့မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်သင်၏နှလုံးကျန်းမာရေးတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
7. အကွိမျမြားစှာ Sclerosis (MS)
နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါများစွာခံစားနေရသလား။ အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင် NAD + အမှုန့်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူရန်သင်စဉ်းစားသင့်သည် NAD + ဖြည့်စွက် ရောဂါလက္ခဏာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်စားသုံးမှု။
မျိုးစုံနဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါသည်ခုခံအားစနစ်တွင် NAD + အဆင့်နိမ့်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ NAD + ဖြည့်စွက်ဆေးသည်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ချို့တဲ့မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးသင်၏ MS လက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေသည်။
8. စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် neurodegenerative အခြေအနေများ
အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်စသော neurodegenerative အခြေအနေကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရလျှင်သင်၏ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန် NAD + ဖြည့်စွက်ချက်သည်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေလို့ဖြစ်ပါတယ် NAD + ချို့တဲ့သင်၏ ဦး နှောက်စွမ်းအင်နှင့် dopamine ကိုလျှော့ချပေးသည်။ ဦး နှောက်စွမ်းအင်နှင့် dopamine သည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောစနစ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ NAD + အဆင့်တိုးမြှင့်နည်းကိုသင်မတွေ့ရှိပါကသင်၏ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သည်။
သဘာဝကျကျ NAD + အဆင့်ဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နည်း
သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကာယလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ NAD + ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လေ့ကျင့်လေလေ၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် mitochondria ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ထုတ်လေလေဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်၏ NAD + အဆင့်သည်သဘာဝကျသည်။
အစာရှောင်ခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအပ်နှံမှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကျင့်သုံးသော်လည်း NAD + အဆင့်တိုးမြင့်ခြင်းနှင့် SIRT1 စတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။
နေမှခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည်သင်၏အရေပြားကိုအိုမင်းစေသည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာနေရောင်ခြည်အလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားသောအရေပြားဆဲလ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်စတိုးဆိုင်များကိုပျက်စီးစေသည်။ ဤသည် NAD + အဆင့်ကိုတစ် ဦး ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးနေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမှရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင့် NAD + level ကိုကျန်းမာစေဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကူညီရန်။ ဒါ့အပြင်နေရောင်ခြည်နဲ့အပြင်မှာသွားနေတဲ့အခါသင့်အသားအရေကိုနေလောင်ခံမျက်နှာပြင်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
4. NAD + ဖြည့်စွက်ယူပြီး
ကျန်းမာသောမျှတသောအာဟာရရှိသောအာဟာရသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအကောင်းဆုံး NAD + ထောက်ပံ့မှု၏ကျောရိုးဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိသူများသည်သာမန်မျှတသောအစားအစာများပေးနိုင်ရန်ထက် NAD + ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် NAD-infused ဖြည့်စွက်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဒီဖြည့်စွက်ဆေးများကိုတောင့်ပုံစံဖြင့်တွေ့ရှိပြီးရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတို့တွင်ဗီတာမင် B50 (နီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်) ပါဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ NAD + သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
NAD + အစားအစာများကိုစားခြင်း
သုတေသီများကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ နီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုင်းဗီတာမင် B3 သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ coenzymes များသည်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သည့် NAD + ကဲ့သို့နောက်ပိုင်းတွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှေးကွေးစေခြင်း (သို့) ပြောင်းပြန်လှန်စေသည့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဗီတာမင် (NAD + အစားအစာများ) ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော NAD + ဖြည့်စွက်စာကိုပေးနိုင်သည်။
နီကိုတင်းနိုက်ရိibosideပါ ၀ င်သည့် NAD + အဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်သင်အားကိုးနိုင်သောအစားအစာများမှာသဘာဝပါဝင်သည်။
နို့နှင့်နို့- သုတေသနပြုချက်အရနွားနို့၏နို့လီတာတိုင်းတွင် NAD + ၉ μmolပါဝင်သည်။
ငါး - တူနာနှင့်ဆော်လမွန်ငါးကဲ့သို့သောငါးမျိုးကွဲ NAD + တွင်ကြွယ်ဝသည်။ တူနာငါးခွက်တွင် NAD + ပါဝင်မှုသည်အကြမ်းအားဖြင့် ၂၀.၅ မီလီဂရမ်နှင့်ဆော်လမွန်အတွက် ၁၀.၁ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Crimini မှိုအကယ်၍ သင်သည် Crimini မှိုတစ်ခွက်သောက်လျှင်သင်၏ခန်ဓာကိုယ်အား NAD + ၃.၃ မီလီဂရမ်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ကြက်သားကြက်သားအသားတစ်ခွက်သည်သင့်အား NAD + 9.1mg ပေးပါလိမ့်မည်။
တဆေးစာများ တဆေးသည်နို့နှင့်နို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြွယ်ဝသော NAD + အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကိတ်မုန့်နှင့်ပေါင်မုန့်စသည့်တဆေးပါသောအစားအစာများသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + အဆင့်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည်။ ဘီယာသည် coenzyme ၏အရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုတော်သင့်ရုံသောက်သုံးသင့်သည်။
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - အချို့သောအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလည်းရှိသည် NAD + အစားအစာများ အထူးသဖြင့်ပဲစေ့များနှင့်ကညွတ်သည်လူငယ်များတိုးတက်စေသောဓာတုဒြပ်ပေါင်း NAD + တွင်ကြွယ်ဝသည်။ ပဲတစ်ခွက်မှာ NAD + ၃.၂ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်ပြီးကညွတ်တစ်ပုလင်းတွင်ဒြပ်ပေါင်း၏ ၂ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည်။
ketogenic အစားအစာချမှတ်: keto အစားအစာတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်အဆီရှိသော်လည်းကာဗွန်ဓာတ်နည်းသောအစာများကိုသာမိမိကိုယ်ကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဤအစားအစာကိုစားလိုက်သောအခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စွမ်းအင်အတွက်ဂလူးကို့စ်အစားအဆီကိုအသုံးပြုသော ketosis ဟုခေါ်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ဤသည် NAD + မှ NADH အချိုးတိုးမြှင့်စေသည်။
NAD + လျော့နည်းစေသောအချက်များ
နိမ့် NAD + အဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်:
နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းက NAMPT အင်ဇိုင်းနှင့် circadian rhythm အတွက်တာဝန်ရှိသည့်မျိုးရိုးဗီဇများကိုတားဆီးပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် NAD + အဆင့်ဆင့်ကျဆင်းသွားသည်။
2. Circadian ရစ်သမ်နှောင့်အယှက်
NAD + ထုတ်လုပ်မှုသည်အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် NAMPT အင်ဇိုင်းလိုအပ်သည်။ သို့သော် circadian rhythm ပြတ်တောက်သွားသောအခါအင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသောမျိုးရိုးဗီဇအားထိခိုက်စေပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျသွားသည်။
သွေးထဲ၌သကြားဓာတ်နှင့်အင်ဆူလင်ဓာတ်များများများများလာသောအခါ NADH / NAD + အချိုးတိုးလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ NADH ပမာဏသည် NAD + အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကများစွာပိုမိုမြင့်မားသည်။
သုတေသနများစွာကအီသနောစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖော်ပြသည် ရလဒ်အနေဖြင့် နာတာရှည်အရက်သုံးစွဲမှု NAD + အဆင့်တွင် ၂၀% ခန့်လျော့ကျစေသည်. အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အရက်သည် coenzyme ထုတ်လုပ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ယာယီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ပျက်စီးစေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
5. DNA ကိုပျက်စီးမှု
ဒီအင်အေသည်အလွန်အမင်းပျက်စီးသွားသောအခါ PARP မော်လီကျူးများပိုမိုလိုအပ်လာလိမ့်မည်
ပျက်စီး DNA ကို၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြုပြင်နှင့် restore ။ မော်လီကျူးများမှာကတည်းက
NAD + စွမ်းအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ပိုမိုပါ ၀ င်ပတ်သက်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်
6. အနိမ့် sirtuin လှုပ်ရှားမှု
sirtuin သည် circadian rhythm ကိုထိန်းညှိပေးသောကြောင့် sirtuin ပမာဏလျော့ကျခြင်းကြောင့် circadian ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အား NAD + အဆင့်လျော့နည်းသွားသည်။
NAD + နှင့် ပတ်သက်၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။
ကိစ္စအများစုတွင် NAD + ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်လုံးဝလုံခြုံသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ coenzyme တိုးမြှင့်ခြင်း၏လုံခြုံစိတ်ချရမှုအဆင့်ကိုတည်ဆောက်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများအရနေ့စဉ် ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်မှ NAD + သောက်သုံးသောဆေးများသည်လူတို့အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
သို့သော် NAD + စားသုံးမှုကြောင့်အန side တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အခြေအနေအနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤသက်ရောက်မှုများသည်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အလွန်အမင်းမောပန်းခြင်း (ပင်ပန်းခြင်း) အပြင်ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
NAD + အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
NAD + ဖြည့်စွက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် NAD + အမှုန့်သည်အဖြူရောင်၊ ros ဂရစကိတ်နှင့်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၏ဓာတုပုံသေနည်း NAD + အမှုန့် is C21H27N7O14P2.
အကယ်၍ သင်သည်တရားဝင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး NAD + အတွက် NAD + အမှုန့်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြည့်စွက်အတု ၀ ယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားနာမည်ကောင်းရှိသောရင်းမြစ်တစ်ခုမှရယူပါ။ NAD + ဖြည့်စွက်စာကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူနှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ NAD + အမှုန့် (သို့) NAD + ဖြည့်စွက်ချက်ကိုအွန်လိုင်းမှာအလွယ်တကူမှာနိုင်သည်။
NAD + coenzyme သည်လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုခုခံနိုင်မှုနှင့် DNA ပြုပြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည့် NAD + အကျိုးကျေးဇူးများသည် coenzyme ၏ဖြည့်စွက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ကိုသာလွန်စေသည်။ ထို့အပြင် NAD + anti aging benefit သည်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုငြင်းပယ်လိုသူများသည် NAD + ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ သို့သော်၊ သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်မှသင်၏နီကိုတင်းနိုက်ဒင်းနူကူလိုတိတ် / NAD + အမှုန့်သို့မဟုတ် NAD + ဖြည့်စွက်အစုကိုရရှိရန်သေချာရန်အရေးကြီးသည်။
Anderson က RM, Bitterman KJ, Wood က JG, et al ။ နျူကလီးယား NAD + ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် NAD + အဆင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲအိုမင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ J ကို Biol Chem။ 2002 မေလ 24; 277 (21): 18881-90 ။
Gomes AP, Price NL, Ling AJ, et al ။ NAD ကျဆင်းခြင်း (+) သည်အိုမင်းစဉ်ကာလအတွင်းနျူကလီးယား - mitochondrial ဆက်သွယ်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် pseudohypoxic state ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
Imai SI၊ Guarente L. NAD နှင့်အိုမင်းခြင်းနှင့်ရောဂါတို့တွင် sirtuins ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆဲလ် Biol ။2014 Aug;24(8):464-71.
စျေး NL, Gomes AP, Ling AJ, et al ။ SIRT1 ကို AMPK activation နှင့် mitverondial function အပေါ် resveratrol ၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများလိုအပ်သည်။ cell Metab။ 2012 မေလ 2; 15 (5): 675-90 ။
Satoh MS, Poirier GG, Lindahl T. NAD (+) - ပျက်စီးသွားသော DNA ကိုလူ့ဆဲလ်ထုတ်ယူမှုများမှမှီခိုပြုပြင်ခြင်း။ J ကို Biol Chem။ 1993 မတ်လ 15; 268 (8): 5480-7 ။
Sauve AA ကို။ NAD + နှင့်ဗီတာမင် B3: ဇီဝြဖစ်ကနေကုထုံးအထိ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2008 Mar;324(3):883-93.
၁။ NAD + ဆိုတာဘာလဲ။
၂။ NAD + ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
4. NAD + လျှောက်လွှာ / အသုံးပြုမှု
5.NAD + သောက်သုံးသော
7. NAD + Levels ကိုသဘာဝကျကျဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
NAD + ကိုလျော့ချစေသောအချက်များ
NAD + အကြောင်း 10.More သတင်းအချက်အလက်